Tsangana ary atsofony Machine Manufacturers & Suppliers | China Tsanganana ary atsofony Machine Factory
Box Tsanganana ary atsofony Machine ZK5140
Hoton milina CNC ary atsofony Machine ZK5140 sy ZK5150 1. Zk5140B sy Zk5140B-1 mitsangana cnc ary atsofony milina dia manerana izao rehetra izao ary atsofony machine.the Max ary atsofony savaivony dia 40mm. 2.Zk5150B sy Zk5150B-1 mitsangana cnc ary atsofony milina dia manerana izao rehetra izao ary atsofony machine.the Max ary atsofony savaivony dia 50mm. 3. Ny latabatr'i Zk5140B, Z5150B tafatoetra sy ny Zk5140B-1, Zk5150B-1 dia latabatra hazo fijaliana. 4. Izany milina ...
Box Tsanganana ary atsofony Machine ZK5150
Box Tsanganana ary atsofony Machine Z5163B Z5180B
Square tsanganana mijidina ary atsofony milina: Square-tsanganana mitsangana ary atsofony milina dia an'izao tontolo izao general-tanjona milina. Ny nampiasaina ho manohitra ny rendrika, mamantatra-miatrika ary atsofony, nipaipaika, mankaleo, reaming, sns ny milina no hahazo ny asa ho azy ny paompy-javatra mifanohitra fitaovana izay mety ho nipaipaika ny jamba sy tapa-kevitra lavaka. Ny milina dia manana fahombiazana avo, avo araka ny marina, feo ambany, ...
Box Tsanganana ary atsofony Machine Z5150A
Square tsanganana mitsangana ary atsofony milina MAMPIAVAKA: Square-tsanganana mitsangana ary atsofony milina dia an'izao tontolo izao general-tanjona milina. Ny nampiasaina ho manohitra ny rendrika, mamantatra-miatrika ary atsofony, nipaipaika, mankaleo, reaming, sns ny milina no hahazo ny asa ho azy ny paompy-javatra mifanohitra fitaovana izay mety ho nipaipaika ny jamba sy tapa-kevitra lavaka. Ny milina dia manana fahombiazana avo, avo araka ny marina, indro ...
Box Tsanganana ary atsofony Machine Z5150B
Square tsanganana mitsangana ary atsofony Machine: 1. Ny latabatr'i Z5140B, Z5150B tafatoetra sy ny Z5140B-1, Z5150B-1 dia latabatra hazo fijaliana. 2. Io milina ihany koa dia afaka malalaka lavaka, fandavahana lavaka lalina, nipaipaika, afa-tsy mankaleo sy sns ary atsofony lavaka. 3. Io andian-dahatsoratra milina manana tombontsoa maro, toy ny fahombiazana avo, hentitra tsara, avo marina tsara, feo ambany, malalaka hafainganam-pandeha range..the milina izay manana latabatra hazo fijaliana, ny latabatra afaka ...
Box Tsanganana ary atsofony Machine Z5150B-1
Box Tsanganana ary atsofony Machine Z5140B
Square tsanganana mitsangana ary atsofony Machine: Square Tsanganana mitsangana ary atsofony Machine Z5140B Main endri-javatra ny milina ary atsofony 1. Z5140B sy Z5140B-1 mitsangana ary atsofony milina dia manerana izao rehetra izao ary atsofony machine.the Max ary atsofony savaivony dia 40mm. 2.Z5150B sy Z5150B-1 mitsangana ary atsofony milina dia manerana izao rehetra izao ary atsofony machine.the Max ary atsofony savaivony dia 50mm. 3. Ny latabatr'i Z5140B, Z5150B tafatoetra sy The ...
Box Tsanganana ary atsofony Machine Z5140B-1
Box Tsanganana ary atsofony Machine Z5140A
Square tsanganana mitsangana ary atsofony milina Square-tsanganana mitsangana ary atsofony milina dia an'izao tontolo izao general-tanjona milina. Ny nampiasaina ho manohitra ny rendrika, mamantatra-miatrika ary atsofony, nipaipaika, mankaleo, reaming, sns ny milina no hahazo ny asa ho azy ny paompy-javatra mifanohitra fitaovana izay mety ho nipaipaika ny jamba sy tapa-kevitra lavaka. Ny milina dia manana fahombiazana avo, avo araka ny marina, feo ambany, W ...
Tsanganana ary atsofony Machine Z5050A
VERTCIAL ary atsofony milina endri-javatra: Ny milina dia natao miaraka amin'ny multi-miasa ny atsofony. Broaching, reaming, nipaipaika ary miatrika fikosoham-bary. Noho ny hery ary atsofony izany fahafahana ny mamela ny workpieces ho drilled amin'ny lehibe isan-karazany ny habeny. Tsy mety ho fampiasana amin'ny famokarana sy ny fikojakojana na fivarotana 1. Easy fandidiana. 2. Casting vy ho ela rafitra mateza. 3. Tsanganana karazana ...
Tsanganana ary atsofony Machine Z5050
Mitsangana manodidina tsangana ary atsofony milina MAMPIAVAKA: 1 .Novel tarehy famolavolana sy ny tsara tarehy, ny firafitry ny poti, isan-karazany ny miova ny hafainganam-pandeha. 2 .Unique miasa latabatra, jiro sy ny boky fampianarana fanandratako rafitra, mora ny miasa. 3. ny latabatra dia afaka hanodinana ny 180 degre na 45 degre, ary azo ampiasaina ho an'ny isan-karazany ny fampiharana. 4.The dia omena amin'ny hihena fitaovana sy ny fitaovana nipaipaika. 5 ...
Tsangana ary atsofony Machine Z5032C
Mitsangana ary atsofony nijoro milina iombonana amin'ny sliding latabatra amin'ny ambaratonga sy ny Adjustable fiatoana ho handrindràna ary atsofony sy ny hazavana mihaohao asa milamina fandidiana diloilo-fandroana lubricated Gears ho ela fitaovana fiainana sy mateza ny fikosoham-bary milina ny faran'izay tsara ampela-jaza mahatanty ambony entana ho an'ny lavitra ezaka Manual fandavahana fahana azo mifamadika amin'ny avo-fahana amin'ny alalan'ny fametrahana mazava tsara ny tanana-kodia Cont ...
Tsangana ary atsofony Machine Z5040C
Tsangana ary atsofony Machine Z5045C
Tsangana ary atsofony Machine Z5040 / 1
Tsangana ary atsofony Machine Z5045 / 1
Tsangana ary atsofony Machine Z5032 / 1
Tsanganana ary atsofony Machine Z5045
Tsanganana ary atsofony Machine Z5040A
MAMPIAVAKA: Ny milina dia natao miaraka amin'ny multi-miasa ny atsofony. Broaching, reaming, nipaipaika ary miatrika fikosoham-bary. Noho ny hery ary atsofony izany fahafahana ny mamela ny workpieces ho drilled amin'ny lehibe isan-karazany ny habeny. Tsy mety ho fampiasana amin'ny famokarana sy ny fikojakojana na fivarotana 1. Easy fandidiana. 2. Casting vy ho ela rafitra mateza. 3. Tsanganana karazana milina ary atsofony mitsangana ...
Tsanganana ary atsofony Machine Z5040
marindrano Lathe , Metal Lathe , Lathe , Sheet Metal Machines , hiondrika Machine , Lathe Machine ,